Yamaha SR အား ရန်ကုန် တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
ရောင်းချသူ: Jamy Tooe
Brand : Yamaha SR
Model. : 2007
Kilometer : 20000 over
Engine power : 400 cc
Price. : 30 lakhs (w) net
Location. : Hpa An
Contact. : 09796826979
မှတ်ချက် ::::::: တာယာ၉၇%/လက်ကိုင်အပူပေးစနစ်/ ကပ်သော့သုံးချောင်း / အနာစာလုံးဝလုံးဝမရှိ/ ကျေးဇူးပြု၍ဘီးပုံလေးတွေ တပုံချင်းကြည့်ပေးပါ /ဂျပန်လေလံဘီးကောင်းဘီးသန့်ဖြစ်ကြောင်း အာမခံပါသည် / ကျေးဇူးတင်ပါသည်
အမည်: Yamaha SR